တုနှိုင်းမဲ့ … မေတ္တာရှင် | ကျွန်မ၏ခံစားမှုများ သီကုံးရာ လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ
July 23, 2008, 1:15 am Filed under: Poems တုနှိုင်းမဲ့ … မေတ္တာရှင်
မျက်ဝန်းတွေကို မော့ကြည့်လိုက်တိုင်းအကြင်နာတွေ ယှက်ဖြာသမီးတွေအနာဂတ်အတွက်အစဉ်အမြဲ အလင်းရောင်ပေးနေခဲ့တဲ့တုနှိုင်းမဲ့ မေတ္တာရှင် မေမေ … ။
အစဉ်အမြဲစီးဆင်းနေတဲ့စမ်းချောင်းလေးလိုနွေးထွေးမှုအစဉ် ထွန်းလင်းပေးတဲ့ နေရောင်ခြည်လိုအေးမြခြင်းအရိပ်လွှမ်းခြုံပေးတဲ့ လအရိပ်လိုဖြူစင်မြင့်မြတ်တဲ့ မေမေ့ မေတ္တာတရားတွေသားသမီးတွေအတွက် အမြဲ လင်းဖြာပေးနေဆဲ .. ။မချိုမြိန်တဲ့ ဘ၀လောကဓံအလယ်ခါးသီးခြင်းကံကြမ္မာအခက်ခဲများအောက်လဲကျသွားတိုင်း ပြန်ထရင်းရဲရဲရင့်ရင့်ဆက်လျှောက်နိုင်ဖို့ခွန်အားသစ်တွေ မေမေအမြဲပေးခဲ့တယ် .. ။
ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သူများအလယ်အမှန်တရားနဲ့ရက်စက်ရိုင်းစိုင်းခြင်းများအသိပညာအလိမ္မာနှင့်ခွဲခြားသိမြင်သွန်သင်ဆုံးမရှင်းလင်းပြောဆိုရင်းဘ၀ရဲ့ အမှန်တရားမီးအိမ်မေမေ ထွန်းညှိပေးခဲ့တယ် .. ။
အပေါ်ယံအချိုသကြားအုပ်ကာအတွင်းကဆေးခါးကြီးဖုံးထားသူများနှင့်တွေ့ကြုံဆက်ဆံရချိန်တိုင်းစေတနာမပျက် မှန်ကန်လေးနက်စွာအသိဥာဏ်ပညာနှင့် ဆက်ဆံတတ်နိုင်ဖို့မေမေ သွန်သင်ပေးခဲ့တယ် .. ။
ဂုဏ်ပကာသန အဆောင်အယောင်စည်းစိမ်ချမ်းသာ အကောင်းဆုံးများဘ၀မှာ ခမ်းနားခြင်းမရှိခဲ့ရင်တောင်သူများခြေထောက်အောင် ဒူးမထောက်ကိုယ့်ဒူးကိုယ့်ချွန်မာနတစ်ခုနှင့်ဘ၀ကို အသက်သွင်းဖို့မေမေအမြဲပုံသွင်းပေးခဲ့တယ် .. ။
အရှုပ်တရားတွေနဲ့ကျင်လည်နေတဲ့လူ့လောကအသိုင်းဝိုင်းအလယ်မှာပျော့ညံ့သူစိတ်ဓါတ်ကင်းစေဖို့ဘာသာတရားအဆုံးမတွေနဲ့သမီးတွေဘ၀ကို အလင်းဖြာပေးခဲ့တယ် .. ။
တခါတရံဖီလာဆန့်ကျင်တတ်တဲ့ သားသမီးတွေမေမေအမြဲခွင့်လွှတ်နားလည်ပေးရင်းမေတ္တာကိုအရင်းခံကာလမ်းမှန်တစ်ခုဆီ မေမေ ပို့ချပေးခဲ့တယ် .. ။
အိမ်ထောင်တာဝန်တစ်ဖက်မောင်တစ်ထမ်းမယ်တစ်ရွက်နဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတစ်ဖက်ဟန်ချက်ညီအောင် ထိန်းသိမ်းလျှောက်လှမ်းရင်းအတောင်အလက်မစုံသေးတဲ့ သမီးတွေအတွက်ပြည့်စုံမှုတွေ အကောင်းဆုံး ဖန်တီးပေးခဲ့တယ် .. ။
ပုခက်လွှဲနေရင်းအခြားတစ်ဖက် မေတ္တာလမ်းမှာအနှစ် နှစ်ဆယ်ကျော် အိမ်ထောင်ခရီးလမ်းတစ်ခုကိုနားလည်သည်းခံမှုတွေ လှိုင်လှိုင်မွေးဖွားရင်းအသိုက်မြုံတစ်ခုကို နွေးထွေးစွာ တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တယ် . ။
ကြီးမားလွန်းတဲ့ မေတ္တာတရားများပြားလွန်းတဲ့ ကျေးဇူးတရားမြင့်မိုရ်တောင်ထက် မြင့်မားတယ်ဆိုတာသမီး လက်တွေ့ယုံကြည်ခဲ့ရပြီမို့ကြီးမားများပြားတဲ့ တုနှိုင်းမဲ့ကျေးဇူးမေတ္တာများအတွက်အကောင်းဆုံးကို ပြန်လည်ပေးဆပ်နိုင်ဖို့ဘ၀ခရီးလမ်းပေါ် ကြံ့ကြံ့ခံကြိုးစားလျှောက်ရင်းတုနှိုင်းမဲ့မေတ္တာများအတွက်ရိုသေစွာ ကန်တော့လိုက်ပါတယ် မေမေ .. ။
ညီမရေ ကျနော်က မရောင်မလည်နဲ့ရောက်လာတာပါ ကဗျာလေးကောင်းပါတယ် ပထမ အပိုဒ် တတိယမှာနည်းနည်းလေး အလေးပေးထားသလိုပဲနော် အပြစ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော် ကျနော်ကလဲဝေဖန်ရလောက်အောင် ဘာကောင်မှ မဟုတ်သေးပါဘူး ရင်ခွင်မဲ့အားလုံးကို ခံစားစေချင်လို့ပါ ။
Comment by နွေဦးမောင်
September 13, 2008 @ 10:07 pm Reply	RSS feed for comments on this post.	TrackBack URI